Fiaramanidina nidaraboka teny an-tanimbary : Jeneraly iray, mpianatra ho mpanamory 4 namoy ny ainy | NewsMada
Par Taratra sur 19/06/2018
Maty avokoa ireo olona dimy tao anatin’ilay fiaramanidina kely, nitondra mpianatra ho mpanamory, nanao sidina fanazarana, nidaraboka teny Ampandrilaza, Ampangabe Ambohitrimanjaka, omaly, maraina. Anisan’ireo namoy ny ainy ny Jeneraly iray avy ao amin’ny Tafika an’habakabaka.
An’ny kaompania Madagascar Trans Air (MTA) ity fiaramanidina kely, mitondra ny marika Piper PA31 5, laharana 5R-MKF niharan-doza ka nianjera teny Ampandrilaza Ampangabe omaly tokony ho tamin’ny 10 ora maraina ity. Maty avokoa ireo olona dimy nentin’ity fiaramanidina ity, nahitana manamboninahitra jeneraly, mpampianatra manamory fiaramanidina sy mpianatra miisa efatra.
Araka ny fanazavan’ny ACM, fiaramanidina fanaovana fanazarana izy ity ary avy ao amin’ny kaompania MTA avokoa ireo mpanamory ireo. Faritra fandalovany ny eny Ampangabe Ambohitrimanjaka sy ny manodidina an’Ivato eny. “Nisy feo niroandroana nanaitra ny olona ary nitazana avokoa ireo. Nahita ilay fiaramanidina nihodinkodina toy ny tandrimo ary nanitsy nitsatoka tamin’ny tany avy eo ary nipoaka mafy. Nisy setroka manity tazana taorian’izay”, hoy ny fitantaran’ny mponina nahita maso ity loza ity.
Nihazakazaka nankeny ny fokonolona nizaha ny zava-nisy ka ilay fiaramanidina efa potika tanteraka no hitan’izy ireo. Raikitra ny antso vonjy ka tonga vetivety teny an-toerana ny zandary, ny avy amin’ny ACM, ny Asecna, ny mpamonjy voina, sns.
Niezaka sao misy ny mbola voaavotra, saingy voa mafy avokoa ireo olona dimy mianaka ka nitarika ny fahafatesany. Nampiasaina hatramin’ny helikoptera nentina nanavotra ireo olona saingy tsy nisy azo natao intsony. “Nanahirana ny nisokitra ireo olona tao anatiny. Potika tanteraka ilay fiaramanidina ka tery tao ireo mpandeha rehetra”, hoy ny fanazavana azo.
Tsy fantatra ny anton’ny loza
Raha ny fanazavan’ny zandary, tsy mbola fantatra mazava ny anton’ny loza. Tsy misy ilay “boite noire” ihany koa amin’ny fiaramanidina kely toy itony ka tsy ahitana izay zava-nitranga na olana tao anatiny talohan’ny nianjerany. Na izany aza, efa misokatra ny fanadihadiana manodidina ity loza ity.
Tsiahivina fa efa nisy fiaramanidina ULM Terras 912-5R-MNS nianjera nentina mpianatra mpanamory toy izao ny taona 2016, ka nahafaty azy io koa. Efa nisy ny fanadihadiana manokana tamin’izany nikarohana ny antony nahatonga ny loza. Tsy nisy moa ny fanazavana ofisialy momba izany taorian’ny fandihadiana. Amin’ity indray mitoraka ity, miandry izay valin’ny fanadihadiana ny rehetra satria mahaliana ny olona ny mahatonga ny fiverimberenan’ny lozam-piaramanidina madinika toy izao. Ny “équipe technique specialist” amin’ny lozam-paramanidina avy amin’ny CAM sy ny tafika malagasy no handray an-tanana ny raharaha raha efa nanao ny tandrifiny amin’ny fanadihadiana manandrify azy ny zandary Ambohidratrimo sy Ivato aéroport. Sao efa tsy tokony hiasa intsony izy ireny? Inona ny karazana fiaramanidina tokony hampiasain’ny mpianatra ho mpanamory fiaramanidina raha tsy te ho tratran’ny loza tahaka izao?